HomeWararka Maanta SomaliskaWar Hada Ah: Sweden oo joojisay Musaafurinta Qasabka ee Qaxootiga kasoo jeeda Dalka Afganistan
July 16, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
laanta Socdaalka Sweden ayaa maanta go’aansatay in ay joojiso dhamaan masaafurinta qasabka ah ee lagu sameynayo Dadka Afghanistan sababo la xiriira xaalada amaanka ee sii xumaaneysa ee halkaas ka jirta, maadaama Taliban ay la wareegeen dhul badan.
Hay’addu waxay ku tiri hadal ay soo saartay, in go’aanka uu si dhaqso leh u dhaqan galayo laga bilaabo maanta ilaa iyo amar dambe.
Waqtigaan la joogo, go’aanka waxaa ku jira ilaa 7,000 oo magangalyo doon Afghanistan ah, oo codsiyadooda la diiday oo ay tahay inay ka baxaan Sweden.
Ciidamada Afghanistan ayaa dagaal la galay maleeshiyada Taliban jimcihii ka dib markii ay bilaabeen hawlgal ay dib ugula wareegayaan marinka weyn ee Spin Boldak ee ay la wadaagaan Pakistan, booliska ayaa sheegay
Dowladda Afghanistan ayaa shaaca ka qaaday in Taliban ay soo jeedisay xabad joojin 3-bilood ah iyadoo lagu badalayo shuruudo, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dowladda ay soo celisay xadka laga gudbo iyadoo lala xiriirinayo dagaalada ka socda dhowr meelood.
Dhinaceeda, Washington waxay dib u cusbooneysiisay u hoggaansamida habsami u socodka iyo wada xaajoodka diblomaasiyadeed.